एनआरएनएले पायो राहत वितरणको अनुमति - Karobar National Economic Daily
एनआरएनएले पायो राहत वितरणको अनुमति
query_builderAugust 23, 2017 11:25 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility220
काठमाडौं : सरकारले बाढी पीडितलाई राहत वितरण गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गरेपछि एनआरएनएले वितरण गर्ने राहत कार्यक्रममा ढिलाइ भएको छ । सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली नीति लागू गरेपछि निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी एनआरएनएले सप्तरी जिल्लामा मात्र राहत वितरणको अनुमति पाएको छ ।
हालै देशभर अविरल वर्षाका कारण तराईका ३० जिल्लालाई प्रभाव पारेको थियो भने सप्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा थुप्रै मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । गत दुई वर्षअगाडि गएको महाभूकम्पमा सरकारी कमजोरी जोगाउन यस पटक एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो । एकद्वार प्रणाली लागू गरेपछि राहत वितरणमा संघसंस्था वा व्यक्तिलाई आफूखुशी राहत वितरण प्रतिबन्ध लागेको थियो ।
एनआरएनएले सप्तरी जिल्लाबाट राहत वितरण अभियान सुरु गरेको छ । एनआरएनएले ४ हजार बाढी पीडित परिवारहरूलाई ६ हजार रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न, टेण्ट वितरण गर्ने अध्यक्ष डा. शेष घलेले बताए ।
राहत वितरणका लागि हालै एनआरएनएका अध्यक्ष घलेसहितको टोली सप्तरी जिल्ला पुगेको थियो । सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डेले एनआरएनएले वितरण गर्ने राहत वास्तविक पीडितहरूकोमा पु¥याउन मद्दत गर्ने बताए । “यो राहत राहतमात्र नभई पीडितहरूको लागि एउटा सहयोग बनोस्,” उनले भने
नेपालको तराई भू–भाग विशेष गरेर कोशी नदी वरपरका बस्तीहरूलाई बाढीले असर गरेको थियो । सो क्षेत्रका बाढी पीडितहरूलाई दुई वर्ष पूर्व गएको महाभूकम्पमा जस्तै राहत वितरण गर्न अध्यक्ष डा. घले र उनकी श्रीमती जमुना गुरुङबाट एक करोड सहयोग गरेर सुरु गरिएको थियो ।
सो सहयोग अभियानको लक्ष्य दुई करोड रहेको छ । हालसम्म २ करोड भन्दा बढीको वचनबद्धता आइसकेको एनआरएनएले जनाएको छ । एनआरएनए राहत अभियान अन्तर्गत करिब ५० जना स्वयमसेवकले चार दिन राहत वितरण गर्ने छन् भने दुई हप्ताभन्दा बढी स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले स्वास्थ्य सिविर सञ्चालन गर्ने छन् ।
यसका लागी जिल्ला प्रसाशन कार्यालय राजविराजले सहकार्य गर्नेछ भने नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले पनि सघाउने छन् । यो राहत वितरणमा सहभागी हुन एनआरएनए केन्द्रीय उपाध्यक्ष भवन भट्ट, अमेरिकाका संयोजक सोनाम लामा, केन्द्रीय सल्लाहकार त्रिलोक यम गुरुङ, राजेन्द्र भट्टलगायत नेपाल आएका छन् ।
एनआरएनए एकद्वार प्रणाली बाढी पीडित राहत वितरण